Ranomasina Mena - Wikipedia
Ny Ranomasina Mena (amin'ny fiteny arabo Bahr el-Ahmar na البحر الأحمر) dia ranomasina an-kontinenta eo amin'ny lemaka be velarana Indo-pasifika eo anelan'i Afrika Avaratra sy ny Atsinanana Akaiky. Ny velarany dia misy 450 000 km². Io ranomasina io dia ranomasina manan-danja sy ahafahan'ny sambo avy any Azia Atsinanana sy avy any Oseania makao Eoropa tsy mila mandalo any amin'ny Cap de Bonne-Esperance, any atsimon' Afrika Atsimo. Ny Lakandranon'i Suez, lakandrano eo anelanelan'ny Ranomasina Mena sy ny Ranomasina Mediteranea dia afahan'ny sambo makao Eoropa.
Ny ranomasina Mena hita avy amin'ny zanabolan'i NASA
Saritany ara-tôpôgrafian'ny ranomasina Mena
Ny Ranomasina Mena dia eo anelanelan'i Afrika sy ny Saikanosy Arabika. Any atsimo, ny Ranomasina Mena dia mifandray amin'ny Ranomasimbe Indinanina amin'ny alàlann'i Bab-el-Mandeb sy ny Helodranon'i Aden. Any avaratra zarain'ny tanjon'i Sinay heloldrano roa izy, ny any andrefana dia ilay malaza ny helodranon'i Suez ary ny any atsinanana dia helodranon'i Aqaba.
Ny halavan'i Ranomasina Mena dia 1 977 km, ary 300 km monja ny sakany. 2 500 kilometatra ny halalin'ny toerana lalina indrindra, eo amin'ny hady anivo. Ny elanelan-kalaliny dia 500 metatra eo ho eo.
Betsaka ny nosy sy tamba-nosy eo aminy. Ireto ny anarany avy any avaratra mianatsimo: Ny Nosin'ny Faraôna, ny Nosy Tiran, i Giftu, i Zabargad, ny Tamba-nosin'i Dahlak, ny Nosy Farasan ary ny Nosy Hanisy.
Ny firenena manamorona ny Ranomasina Mena dia i Jiboty, i Eritrea, i Sodàna, i Ejipta, i Israely, i Jordania, i Arabia Saodita ary i Iemena.
Ireto ny tanàna sasany eo amorontsiraky ny Ranomasina Mena: Assab, Port Soudan, Port Safaga, Hurghada, Suez, Sharm el-Cheikh, Eilad, Akaba, Dahab, Jiddah, Al Hudaydah.
Ny Ranomasina Mena dia anisan'ny ranomasina masira indrindra eto an-tany miaraka amin'ny hasira 45 USP kanefa ny elanelan-kasiran'ny ranomasina sasany dia any amin'ny 35 USP any ho any. Ny ranon'ny Ranomasina Mena izany dia ranomasina mavesatra kokoa. Ny aingan' Arsimeda milaza fa ny vatana dia mitsangeva kokoa ao amin'ny ranomasina Mena.
Ny hafanana eo ambohon-dranon'ny Ranomasina Mena dia tsy miovaova, 21-25 °C. Io no mahatonga azy ho isan'ny ranomasina mafana indrindra eto an-tany. Ny fahitana dia tsara (mangarahara) hatrany amin'ny halalina 200 m, fa mety mandrivotra mafy tampoka ary ny korian-dranomasina dia mety mampilentika ny sambokely.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranomasina_Mena&oldid=973707"
Dernière modification le 31 Aogositra 2019, à 11:04
Voaova farany tamin'ny 31 Aogositra 2019 amin'ny 11:04 ity pejy ity.